ငါနဲ့ ငါကြား ဗျာများနေဆဲ....ငါ....
ဒီနားကို Select ပေးပြီးရေးပါ...
Posted by sawgangster at 2:50 AM No comments:
Super Book Newsletter..
Posted by sawgangster at 2:46 AM No comments:
လူကျွံဘော (Men 0ut)
ကဘာ့ဖလားရာသီကာလအတွင်းမှာ ဘောလုံးပွဲတွေကို ကြည့်ရင်း အရင်က ဘလောမှာ ရေးခဲ့ဘူးတဲ့ ဘောစကား ဆိုတာလေး ပြန်ရေးဖို့ စိတ်ကူးရလာတယ်…။ ဘောစကားဆိုတာက ဆရာသုမောင်ရဲ့ ကွမ်းစကားစာစုကနေ အတွေးရလာတဲ့ စာစုပါ။ သူကတော့ ဘောလုံးအကြောင်းရေးတာမဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းတွေမို့လို့ ဘောစကားလို့ ပေးထားတာပါ။ ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကနေ ဘ၀အတွက် သင်ခန်းစာယူနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပါ။
ဘောလုံးပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စည်းကမ်းတွေမှာ လူကျွံဘော ကလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာထက် ပိုစောရောက်နေတဲ့အတွက် လူကျွံဘောအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ ခဏလေးသာစောင့်ရင် တကယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်ပြီး အသင်းအတွက်ပါ ဂိုးတွေသွင်းနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကနေ မစောင့်နိုင်ပဲ စောသွားတဲ့အခါ လူကျွံဘောဖြစ်ရပါတယ်။ တင်ပေးလာမယ့် ဘောလုံးကို နောက်တန်းကလူတွေနဲ့ အတူ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကပြီး စောင့်နေပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ နောက်တန်းလူတွေထက် ပိုပြီးဦးအောင် ကြိုးစားရင်း ဂိုးတွေသွင်းရမှာပါ။
ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာလည်း လူကျွံဘောတွေ ခဏခဏဖြစ်ရပါတယ်။
ဆိုရိုးစကားတောင်ရှိပါတယ်ဗျာ။ ကြမ်းကျွံတာ နှုတ်လို့ရတယ်၊ စကားကျွံတာ နှုတ်လို့မရဘူးတဲ့။ အခုတော့ဗျာ… လူတွေက ကျွံနည်းမျိုးစုံနဲ့ကို ကျွံနေကြတော့တာပါပဲ။ စကားအနေနဲ့လည်း ကျွံလိုက်တာပဲ။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်လည်း ကျွံလိုက်တာပဲ။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံတဲ့။ ပါးစပ်ကလည်း ပက်ပက်စက်စက် ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် ပြောလိုက်တာပဲ။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်လည်း တီးမလိုက်တာပဲ။ စိတ်နဲ့လည်း ပစ်မှားလိုက်ကြတာပဲ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုတွေမှားပြီး သေသေချာချာ မစဉ်းစားပဲ တွေးပစ်လိုက်တာ၊ ထင်လိုက်တာ၊ ပြောလိုက်တာ၊ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ အမှားတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရသလို ဆက်ဆံရေးတွေ အေးခဲပြတ်တောက်သွားခဲ့ကြရတယ်။ နောင်တတွေ ရခဲ့ကြရတယ်။
တခါတလေကျရင်လည်း သူများပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာကို သိလျက်နဲ့ စည်းမစောင့်ပဲ လိုချင်လိုက်ကျတာ။ သိမ်းပိုက်လိုက်ကြတာ တဖက်သားအတွက် နစ်နာသလို၊ လူအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်း ငြိစွန်းပါတယ်။ ဘ၀မှာ အမည်းစက်ကြီးတွေအဖြစ်ပါ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဘာသာတရားအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့က ဘုရားသခင်ဆီမှာ လိုချင်တာတွေကို တောင်းတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မစောင့်နိုင်ကြဘူး။ ဘုရားသခင်က အရာခပ်သိမ်း သိကျွမ်းတော်မူပြီး အချိန်တန်တဲ့အခါ လိုချင်တာထက်ကို ပိုပြီးကောင်းကြီးတွေကို ချပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုချင်တာတွေ ချက်ချင်းမရတဲ့အခါ ဘုရားကို မေးခွန်းထုတ်ကြတယ်။ အပြစ်တင်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ကိုယ်လိုချင်တာအတွက် လိုအပ်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုသာ လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင် ဘုရားသခင်က ပေးမယ်ဆိုတာ ဧကန်မလွဲပါပဲ။
ဆိုတော့ကာ ဘ၀မှာ လူကျွံဘောတွေ မဖြစ်ရအောင် အသိတရားတွေနဲ့ သတိထားပြီး တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ နားလည်မှုတွေထားပြီး ကိုယ်မျှော်လင့်ချက်ပန်းတိုင်တွေဆီ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကြိုးစားချီတက်ရင်း အောင်မြင်မှုတွေ ရယူကြပါစို့လားဗျာ…။
Posted by sawgangster at 8:42 AM No comments:
Light A Candle With SocialKonnekt And Pray For Japan
Hi saw4ni.gangster ,
Hay He Saw
Posted by sawgangster at 5:19 AM No comments:
Posted by sawgangster at 5:13 AM No comments:
ကွိစိကွစိများနဲ့ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံခြင်း
ဒီနေ့က ပထမဆုံး အလုပ်ဆင်းတဲ့နေ့....
ကွိစိကွစိတွေနဲ့ တစ်နေကုန် ထိုင်အလုပ်လုပ်ရတယ်...
ကန်မလေးတွေကလည်း များလိုက်တာ.... အကောင်းမထင်နဲ့... ကန်မလေးများလေ အတို့အထောင်များလေပဲ.. (ကိုယ့်ဘော်ဒါက ပြောတာနော်)
မြန်မြန်အလုပ်ဆင်းတော့ မြန်မြန် အတွေ့အကြုံရပြီး... မြန်မြန် ပိုက်ဆံရတာပေါ့နော့...
သူဋ္ဌေးမက အမိုက်စားပဲ.... သွက်လက်တက်ကြွလို့...
ညနေ ဆေးစစ်ဖို့သွားတာ နောက်ကျသွားတယ်.... အလုပ်က ထွက်တာလည်း နောက်ကျတာကော..
မနက်ဖြန် ဆေးစစ်ရမယ်... ဒါပြီးမှ ကဒ်ရမှာ.... ကဒ်ရပြီးမှာ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရမှာ...
အစမ်းခန့်က ခြောက်လတဲ့ဟေ့... ကြိုးစားထား....
Posted by sawgangster at 7:08 AM No comments:
ပရိုဖက်ရှင်နယ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပေါင်းစုံက
ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေကို နှစ်နဲ့ချီပြီး သုတေသနလုပ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်
စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရှင် ဒေါက်တာဒေ့ဗ်ခါလီက
အောင်မြင်နေတဲ့ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေမှာ တွေ့ရ လေ့ရှိတဲ့
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ တူညီတဲ့အချက် ၁၀ ချက်ကို စုစည်းတင်ပြ
ထားတာ ရှိပါတယ်။ ပရိုဖက်ရှင်နယ် ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးရှိလာဖို့
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးခြင်းဖြင့် တည်ဆောက်လို့ ရနိုင်
တယ်ဆိုတာလည်း သူကဆိုပါတယ်။ ဒီအချက် ၁၀ ချက်ကို ကြုံတုန်း
အောင်မြင်တဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေဟာ သူတို့လုပ်တဲ့ အလုပ်တိုင်းကို
အလေးထားပြီး စိတ်ရော ကိုယ်ပါနှစ်ပြီး လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့အတွက်
ဘယ်လို အလုပ်မျိုးမှ အရေးမပါတဲ့ အလုပ်မရှိပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်အပေါ်
အလေးထားမှုဟာ အောင်မြင်တဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ် တစ်ယောက်ရဲ့ သိသာ
ထင်ရှားတဲ့အရည်အချင်း တစ်ခုပါ။ သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို
တစ်စိုက်မတ်မတ်နဲ့ စွဲစွဲမြဲမြဲဦးတည်ပြီး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ကိုယ့်ဦးတည်ချက်ကို ဘယ်လို အခက်အခဲမျိုး ကြုံပါစေ နောက်မဆုတ်ဘဲ
ကြိုးစားကျော်လွှားပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်တတ်ကြသလို ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်
ကိုင်ဖက်တွေကိုလည်း သူယုံကြည်တဲ့ အတိုင်း ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်ကြပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင် အမြဲတမ်း
ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်၊ တိုးတက်အောင် လုပ်လို့ ရနိုင်သမျှ
ပိုတိုးတက်အောင် အမြဲတမ်း ကြံစည် ကြိုးစား အားထုတ်နေတဲ့ သူတွေလို့
ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပြိုင်ဘက်တွေ၊ အခြားသူတွေကို အနိုင်ယူချင်တဲ့
စိတ်ဓာတ်ထက် ကိုယ့်အလုပ်ကို အမြဲတမ်း ပိုကောင်းအောင် လုပ်တဲ့ အကျင့်
ရှိတယ်လို့ဆို ကြပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို
ပြိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ သူတုိ့ဟာ အောင်မြင်မှုကို ယစ်မူးသာယာနေကြတဲ့
သူမျိုးမဟုတ်ကြဘဲ အောင်မြင်တစ်ခု ရပြီးသွားရင် နောက်တစ်ခုအတွက် အမြဲတမ်း
လောကမှာ အသေချာဆုံးက မသေချာတာပဲလို့ အဆိုရှိပါတယ်။ ကိုယ်
မျှော်လင့်ထားတာတွေ ဖြစ်မလာတဲ့အခါ၊ မမျှော်လင့်တာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ
အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အလေ့အကျင့်
ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေဟာ မသေချာမှုတွေ၊
အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲအခြေ အနေတွေ ကြားထဲမှာပဲ
အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်အောင် ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းတတ်ကြပါတယ်။ လိုအပ်ရင်
လိုအပ်သလို အခြေအနေနဲ့အလိုက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် လုပ်နိုင်ကြပြီး
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို မရောက်ရောက်အောင် သွားနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်
ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုး မှာလုပ်လုပ်၊ ဘယ်လို
ရာထူးမျိုးနဲ့ပဲနေနေ ပြောဆို ဆက်ဆံကောင်းမွန်မှုဟာ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့
ပရိုက်ဖက်ရှင်နယ်တွေ အနေနဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့၊ သိစေချင်တဲ့
အကြောင်းအရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ တိတိ ကျကျ၊ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့
ပြောတတ်ဆိုတတ်၊ တင်ပြတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အနေ နဲ့
သူတစ်ပါးနဲ့ပြောဆို ဆက်ဆံရာမှာ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြောဆို ဆက်ဆံတတ်တဲ့
အလေ့ အကျင့်ကောင်းကို ပျိုးထောင်ထားဖို့ လိုပါမယ်။
ဘယ်အလုပ်မဆို လေးတိလေးကန်လုပ်လို့ မပေါက်ရောက် နိုင်ပါဘူး။
စာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သွက်လက်တက်ကြွတဲ့ သူတွေဟာ
အမြဲတမ်း အလုပ်ပိုပြီးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုနယ်ပယ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်
အောင်မြင်တဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေဟာ သူတို့အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် အမြဲတမ်း
တက်တက်ကြွကြွနဲ့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတတ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ အလုပ်နဲ့
ပတ်သက်လို့ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့အလုပ်နဲ့
ပတ်သက်တဲ့ ထက်မြက်သွက်လက်မှုကို ဘယ်လိုမှ မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။
ပရိုဖက်ရှင်နယ်ကောင်းများဟာ မိသားစုဝင်တွေ အချင်းချင်းရော၊
လုပ်ငန်းခွင်မှာပါ ကူညီ ရိုင်းပင်းတတ်တဲ့ သူမျိုးတွေဖြစ်နေတာကို
တွေ့ရပါတယ်။ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှု (Team Work) ကို အထူးအလေးထား
တန်ဖိုးထားတတ်ကြသလို အခါများစွာမှာ သူတစ်ပါးကို ကူညီဖို့ လည်း အဆင်သင့်
ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေမှာ အပေါင်းအသင်း
မိတ်ရင်း ဆွေရင်းတွေ အများအပြား ရှိနေတတ် ကြပြီး အဆက်အသွယ် ကောင်းတွေလည်း
အောင်မြင်တဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေရဲ့ အလေ့ အထတစ်ခု ကတော့ လုပ်သင့်တယ်ထင်တဲ့
အလုပ်တွေကို ဘယ်သူကမှ ခိုင်းတဲ့အထိမစောင့်ဘူး ဆိုပါတယ်။ အသေးအမွှား
အလုပ်ကစလို့ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတွေအထိ လုပ်သင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ရင်
ဘယ်တော့မှ လက်တွန့်နေတာ၊ နှောင့်နှေးနေတာမျိုး မရှိဘဲ တာဝန်ယူတတ်တဲ့
စိတ်၊ တာဝန်ခံတတ်တဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ ကိုယ်ကစပြီး လုပ်ကိုင်တတ်ကြပါတယ်။
တကယ်အလုပ် လုပ်ကြတဲ့အခါ ဘယ်လုပ်ငန်းခွင်မှ စိတ်ဖိစီးမှု မရှိတဲ့
အလုပ်ရယ်လို့ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ထူးချွန်တဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေအတွက်
လုပ်ငန်းခွင် စိတ်ဖိစီးမှုဟာ သူတို့ အလုပ်အတွက် တွန်းအားတစ်ခုလို့
ဆိုပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ
တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေပြီး ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို အကောင်းဆုံး
လုပ်သွားနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ သူတို့ဆီမှာရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလို
အခြေအနေမျိုးမှာ သူတစ်ပါးကို အလွယ် တကူအပြစ်ပုံချတာမျိုး၊
ခေါင်းရှောင်တာမျိုး မရှိကြပါဘဲ လုပ်သင့်တာကို မှန်မှန်ကန်ကန်
ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေဟာ ကိုယ်ရပ်တည်တဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ် နယ်ပယ်မှာ
ကျွမ်းကျင်မှု ရှိရုံသာမက ကိုယ့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အတတ်ပညာ နယ်ပယ်နဲ့
ပတ်သက်လို့ အမြဲတမ်း စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာနေကြပါတယ်။ အသစ်အသစ်သော
တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုတိုင်းကို မျက်ခြေပြတ်မခံဘဲ တတ်သိနားလည်အောင် ကြိုးစား
ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အရည်အချင်းဟာ နယ်ပယ် အသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ အောင်မြင်တဲ့
ပရိုဖက်ရှင်နယ်တိုင်းမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အရည်အသွေး တစ်ခုပါ။ သူတို့ဟာ
ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အခြေအနေမှန်ကို အကောင်းဆုံးသုံး
သပ်နိုင်တဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အခက်အခဲ တွေကို လမ်းသစ်ထွင်
စဉ်းစားနိုင်တဲ့သူ၊ ပြဿနာ တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ သူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့
ဆိုပါတယ်။ လုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ လုပ်ရဲ၊ ကိုင်ရဲ၊
ပြောဆိုရဲတဲ့ သူတွေဖြစ်ကြလို့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လူအများက လေးစားအားကိုး
ခံရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ပရိုဖက်ရှင်နယ်စိတ် ဓာတ်ရှိမှု၊
တစ်နည်းအားဖြင့် ပရိုဖက်ရှင်နယ် ဆန်မှု၊ မဆန်မှုဟာ လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့
အကျိုးစီးပွားသာ မကဘဲ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအပါအ၀င် ကဏ္ဍ
အသီးသီးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက်အကျိုးသက် ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ယနေ့နိုင်ငံတကာမှာ ပရိုဖက်ရှင် နယ်အင်အား တောင့်တင်းတဲ့
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ကောင်းတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ
နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်တွေမှာ ဦးဆောင်နေရာ ယူထားနိုင်ကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဒီလို လူသားအရင်း အမြစ်ကို မူတည်လို့ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးဝင်မှု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မှု စတဲ့
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကျိုးဆက်တွေ ဆင့်ကဲ ဖြစ်ထွန်းလာပါတယ်။
ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တွေကလည်း တစ်ခါပြန်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတွေမှာ
ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေ ပိုမို ထွက်ပေါ်လာအောင် တွန်းအားပြန်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့
ပရိုဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတို့
အပြန်အလှန် အကျိုးပြုပြီး ဖြစ်ထွန်း လေ့ရှိပါတယ်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရရင်
ပရိုဖက်ရှင်နယ် ဆိုတာ အတတ်ပညာရော အသိပညာပါ ရှိတဲ့သူလို့ ဆိုရမှာပါ။
ပရိုဖက်ရှင်နယ်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ရာမှာ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ
သင်ယူမှုတွေနဲ့ ရေရှည် တည်ဆောက်သွားရတဲ့ ခရီးရှည် တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်
လူငယ်တွေအနေနဲ့ အခြေခံပညာပြီးလို့ အဆင့်မြင့် ပညာသင်ယူတဲ့ အခါမှာ
ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့၊ ကိုယ့် အတွက် အမှန်တကယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
လုပ်နိုင်မယ့် ပညာရပ်တွေကို သေသေချာချာရွေး ချယ်ပြီး
လေ့လာသင်ယူဖို့လိုသလို၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ပရိုဖက်ရှင်နယ်ကောင်း
တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလေ့အကျင့်
ကောင်းတွေကို လေ့ကျင့်ဖြည့်ဆည်းသွားဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဒါမှ
ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ် ကောင်းတွေဖြစ်လာမှာပါ။ မြန်မာလူငယ်များ
အောင်မြင်တဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ်များ ဖြစ်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုရင်း...
Posted by sawgangster at 10:32 PM No comments:
"Step Up2The Streets" ဒီကားလေးလည်း ကြည့်ကောင်းမှာ...
Check out this video: Step Up2The Streets – Music Video Mash-up
ဟိုးဟိုး....ဗွီဒီယိုလေးတွေ တင်းလို့ရပီ....ဒီကားတွေ ကြည့်ချင်နေတာ..
Check out this video: 10,000 B.C.
ပန်းခရေ (သို့) စိန်မမ
footprints colorblind Republic MMA - Myanmar Mp3 Albums Black Dream Liverpool fans club, Myanmar Dhammaratha gugu (photo) မိုးဝေ မောင်သုည ဆရာကောင်ကလေး မင်းတစေ မင်းဇော် ကျွန်တော့အိမ် (သို့) တီး ညမီးအိမ် စောလင်းနက်စ် ဂီတာနဲ့ဂီတ ဓါတ်ပုံချစ်ဦး ဖိုးဖိုးကြီး ကိုပေါက်ကျိုင်း ရဲရင့် ယိမ်းနွဲ့ပါး သုညလမ်း
ပန်းရွှေရောင်မမ စမိုင်းမေ ကောင်မလေး ပန်းခရမ်းပြာ ခင်ဦးမေ မေငြိမ်း ဒီဇင်ဘာနတ်သမီးလေး နံမည်ရှည်ရှည်နဲ့ကောင်မလေး လွတ်လပ်သူလေး Poem Wallpaper ချစ်သူလေး ယောဟန်အောင် ရွက်မွန်